Ngokuvamile, inkinga yezifo esimiso senhliziyo nemithambo yegazi emhlabeni kuthatha kuyingozi kakhulu kusukela iphuzu Ngenxa ubunjalo ukulondeka kwabantu, kungashiwo, ke ingena umqedazwe ezingamahlalakhona. Ayikho ngaphandle kulolu chungechunge yilona unhlangothi, izimpawu okuyinto ezingasho kungatholakala ngisho abantu abadala kakhulu, futhi ngezinye izikhathi e izinsizwa kakhulu nabesifazane.
Njengoba umkhuba ubonisa, ungathola izinhlobo ezimbili unhlangothi abantu - kuyinto palsy futhi ngaleyo ndlela patchy. Ngamunye wabo ngezindlela ezingafani, libhekene awayo izimpawu. Kuyaqondakala ukuthi ngombono imitholampilo yingozi kakhulu futhi okunzima ukuvuza ngokuya inqubo kwehliswa ngokwemvelo unhlangothi-cerebral palsy, izimpawu, ngenhlanhla, ungakwazi buhluke kakhulu.
Lezi zihlanganisa nezinhlobo ezithile iziyaluyalu engqondweni yethu, ezifana nomuzwa stupor, ukozela, injabulo ezimbi kakhulu, kungase kwenzeke futhi emfushane, ngokuvamile cishe imizuzu engu 1-2 ukulahlekelwa Imininingwane ukwazi. Njengoba inketho, kuwuphawu inhlekelele eseduze isuke kungaba "zasendle, babulawa" ikhanda nge isicanucanu, isiyezi, nge ofaka ku ngendawo 'yakwalasha', umsindo nokucinana ezindlebeni, kwenhliziyo, ukujuluka, kungenzeka imfiva, nomlomo owomile, nokunye okunjalo.
Ngenxa yalokhu, i-stroke ebalulekile, izimpawu zazo, okokuqala kunakho konke, kuncike endaweni oye wahlupheka kusukela ukulahlekelwa liningi igazi, abekho ngaphansi esabekayo. Ake sithi, micro-stroke hit endaweni zobuchopho unesibopho ukunyakaza komuntu. Kulesi simo, ungase ucabange ukuthi ubuthakathaka ezingalweni nasemilenzeni, isimiso, kuze ukuthuthukiswa ukukhubazeka. ukwephulwa okunjalo kuyagcinwa in iziguli kahle igazi ebuchosheni ngokusebenzisa Umthambo carotid.
Kwezinye izimo, akukho okuqinisekile kuleli ethintekile Gait ukungalingani kanye nesicanucanu esibi. Futhi lolu hlobo umtholampilo isivele ezivamile in iziguli kwegazi iwukusebenzisa emgogodleni. Ezimweni ezinjalo kungenzeka, njengoba ezibukwayo, kunjalo, isimiso, futhi babone izinto ezingekho sokuzwa.
Njengoba kubonakala kusukela impahla osekushiwo, inkinga ngokuya izimpawu unhlangothi liyinkimbinkimbi futhi ezihlukahlukene. Ngenxa yalesi sizathu, ukwenza nje self-ukuxilonga unhlangothi, izimpawu ezingavikelekile njalo ngokwanele kungenziwa esikalini, futhi nokuthi ngemaminithi ekucala lapho kuqala izimpawu noma ngisho izinsolo sifo kufanele ngokushesha shayela i-ambulense, kubaluleke kakhulu uye kudokotela uyofuna icebiso.
Ukuba yinkimbinkimbi kwayo udaba sendlela yokuphatha abanye unhlangothi, liqukethe yokuthi imiphumela isifo ngokulandela ekuhlehleni kungenzeka cishe ezingalindelekile. Kunzima ukubikezela esikhathini esifushane futhi silangazelela ukuba inqubo ekuhlehleni. Kusobala ukuthi ngisho ngemva kokubuyiselwa egcwele umsebenzi lowo muntu ngeke uphumule, kufanele unake okukhethekile impilo yabo, ukuvimbela kokushelela.
Isimanga siwukuthi ngisho nangemva kokuba udokotela zilethwe sitholakele isiguli unhlangothi eziningi abantu, ngenxa yokuntula kwabo ukuqeqeshwa noma ekuzenzeni iqhawe ngokweqile senqabe esibhedlela. Kusobala ukuthi lena - sverhnaplevatelskoe sengqondo impilo yabo, ekugcineni, ukuphila. Kodwa, uma umuntu, kungakhathaliseki ukuthi ibangelwa yini, ayikalungi ukuphendula bazenza emizimbeni yabo impilo yabo, ukuphila, khona-ke, kungase kukuzuzise kulesi simo, cabanga ngemizwa yomkhaya, abangane, abathandekayo futhi enze isinqumo esifanele mayelana esibhedlela. Kuyinto endaweni esibhedlela angafeza ukwelashwa kudingekile esibanzi, ukuvumela, eminye, ukubamba yokwelapha ezanele yesifo zaba namandla kakhulu.
Indlela ukukhetha ithebhulethi "Lenovo" 7 amasentimitha nge-SIM khadi?